Actress Bridget Moynahan wuxuu qeexayaa uurka, Tom Brady iyo fasaxiisa buug cusub - dadka - Teles RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE » L'actrice Bridget Moynahan décrit la grossesse, Tom Brady et sa rupture dans un nouveau livre – people
Actress Bridget Moynahan wuxuu qeexayaa uurka, Tom Brady iyo fasaxiisa buug cusub oo ah - dadka
Bridget Moynahan daabacay buug aqooneed cusub oo maqaalo waxyoonay kabaha haweenka, iyo kitaabkii ka mid noqon doona sheekada oo lagu faah faahinayo iyada dadweynaha uurka ka dib xilligii nasashada, iyadoo quarterback Patriots ah Tom Brady.
garaac Shirkadeena, Selves, Xulasho sheekooyin ah oo sheekada sheekada sheekooyinka 40 haweenka saameynaya kabaha ugu qotodheer iyo wadaagida xusuusta iyaga la xiriirta. Moynahan sheekadiisa gaarka ah, oo ka muuqan doonta buugga la sii deyn doono April 9, ayaa ka dhici doonta isaga oo ka soocaya Brady, maadaama ay sugaysay wiilkeeda Jack iyo inuu u guuray qaabka iyo guurka Gisele Bundchen.  "Waxaan lahaan lahaa gawaarro i raacaya aniga iyo raggu ku dhuumanayaan duurka horteeda," ayuu Moynahan u sheegay dadka wakhtigaas. "Hooyo cusub, waxaad dooneysaa inaad ilaaliso ilmahaaga. Dareenka noocan ahi wuxuu ahaa khatar. "
Warbaahintu way ka xumaatay nolosheeda shaqsiyadeed ee murugsan waxay ka tagtay dareenkeeda oo nugul. Laakiin alum ah "Sex iyo City ee" ayaa sida muuqata helay dareen xoog markay on kabaha mooto Barneys dhacay halka laga fogaado dhingnay ah.
"Aan ka helo qaar ka mid ah" New York ", hub yar."
Flash weeraryahanka, iyo Moynahan iyo Brady ayaa sheegay in uu abuuray xaalad in a co-waalidnimada joogto ah oo lagu kalsoonaan karo ay 11 hadda sano jir ah - oo uu ganacsade Andrew Frankel iyo Bundchen.
"Tom iyo waxaan go'aansaday inaan wada kicin ilmaha iyo waxaan labada helay hawlgalayaasha kii ma aha oo kaliya naga caawisay in ay kor u ilmahan, laakiin sidoo kale jecel yahay our ilmaha sida haddii ay ahayd u ​​sugnaaday," ayay u sheegtay ayuu yiri. "Uma maleynayo inaad weydiisan karto in ka badan intaas. Wiilkaygu wuxuu ku hareereysan yahay jacayl. "
Dadka: "Waa wax laga xumaado": Taageerayaasha Laurence Boccolini ayaa shoogay ka dib markii video-keeda ugu dambeeyay
T'neeya, oo kor u qaadaya heesaha reer Cameroon ee afurka / nafta!